Shirkii Burco iyo 17-Kii Qof ee Saxeexay Gooni-isu-Taaga Somaliland-W/Q: Cali Cabdi Coomay | Somaliland Today
← XISBIGII WADANI OO SI TOOS A………
Saddex aan isla jaan qaadayn (qabyaalad, qaad iyo siyaasad) Cabdicasiis Ibraahin Ciise (Daacad) →
Shirkii Burco iyo 17-Kii Qof ee Saxeexay Gooni-isu-Taaga Somaliland-W/Q: Cali Cabdi Coomay
Shirkaasi wuxuu bilaabmay goor casar ah, xaafada shacabka ee Burco. Shirkan oo ay gadhwadeen ka ahaayeen jabhadii S.N.M waxa guddoominayey, guddoomiye ku xigeenkii S.N.M Xasan Ciise Jaamac, wuxuu sheegay in shirkani yahay mid lagu walaalaynayo shacabkii somaliland ee Taliskii Max’ed Siyaad hubka isugu dhiibay. Halkan waxaynu isgu nimid inaynu beelaha reer waqooyi (somaliland) isku turxaan bixiyaan. Iyadoo la tixgalinayo go’aamadii shir beeleedkii Burco ayuu golihii dhexe ee S.N.M ku dhawaaqay in somaliland tahay Qaran madax banaan 18/5/1991. Muddo yar ka dib waxa la dhisay dawladii ugu horaysay ee somaliland yeelato. Dawladaasi waxa ragaadiyey khilaafaadkii jabhadii S.N.M oo toban sanno huursanaa, hawlihii loo xilsaaray way gudan kari waayeen, markii dagaallo hoose ka dhex-qarxeen. Golohoodii wakiiladanu waxa u qabsoomi waayey shirkii, ka dib markii Prof. Ibraahin Maygaag Samatar Oo Guddoomiyaha ahaa isugu yeedhay dhawr jeer.Shirka Walaalaynta Beelaha Woqooyi, kaasi oo qabsoomay muddadii u dhaxaysay 27/Abril/1991-05/June/1991-kii, waxaanu ahaa mid gaar u ah Guurtida SNM oo lagu dhisay shirwweynihii Lixaad ee SNM, Balligubadle, 1990-kii, oo lagu kordhiyay xubno ka socda Gobollada Awdal, Sanaag-bari iyo Sool. Waxa shir-guddoon ahaa Sheekh Ibraahin Sheekh Yuusuf Sheekh Madar.
Magacyadii Guurtida saxeexday gooni-isu-taagga Somaliland ee ku qornayd warqaddii xambaarsanayd go’aanka la soo noqoshada madax-bannaanida waddanku waxay kala ahaayeen toddoba iyo toban qof oo uu weheliyo Xoghayihii Shirku. 17-ka Qof waxay kala ahaayeen:
Xaaji Aadan Axmed Diiriye (Baradho) oo ahaa Xoghayaha Shirkaasi
Markii ergada shirka Burco uu Xaaji Aadan Axmed Diiriye (Baradho) oo ahaa xoghaya
shirku u akhriyay natiijada shirka madax-dhaqameedka, waxa ay mujaahidiintu soo
jeedisay qodob toddobaad oo ah: In mujaahidiinta SNM la siiyo mudnaanta xagga shaqada, kaas oo la oggolaaday.
Waxa isaguna qabsoomay Shirkii Golaha Dhexe ee SNM, waxa la soo hordhigay go’aamadii shirka Guurtida, waxa Golaha dhexe culays lagu saaray in ay ansixiyaan go’aamada ka soo baxay Guurtida, gaar ahaan qodobka madax-bannaanida Somaliland, sidaas ayuu Cabdiraxmaan Axmed Cali “Tuur” ugu dhawaaqay la soo noqoshada xorriyaddii Somaliland ay Ingiriiska ka qaadatay 26/Juun/1960-kii. Waxa lala oogsaday sacab iyo mashxarad. Si weyn ayaa loogu diirsaday xorriyada kow iyo soddon kaddib la helay. Rasaastii farxadda awgeed meelaha qaar cirka loo ganayay ayaa sababtay in ay waxyeello ka soo gaadho dabaal-degayaasha.Go’aannada ugu waawayn ee shirkaas ka soo baxay waxa ka mid ahaa:
The Search For Peace oo ay soo wada saareen APD, Interpeace iyo Diiwaanka Dhaxal-
reeb Horaad ee uu qoray Boobe Yuusuf Ducaale.